Kaddib dhaawacyadii Pablo Mari, Grani Xhaka iyo Bernd Leno oo lagu daray ganaaxii David Luiz, Arsenal oo halis ugu jirta xiddig kale inay weyso kulanka soo socda… (Waa kuma xiddigaas? Maxaase sabab u ah?) – Gool FM
Kaddib dhaawacyadii Pablo Mari, Grani Xhaka iyo Bernd Leno oo lagu daray ganaaxii David Luiz, Arsenal oo halis ugu jirta xiddig kale inay weyso kulanka soo socda… (Waa kuma xiddigaas? Maxaase sabab u ah?)
Haaruun June 21, 2020
(London) 21 Juun 2020. Tan iyo soo laabashadii Premier League, kooxda Arsenal ayaa dhex maquurraneysa maalmo adag oo xambaarsan guuldarrooyin, ganaax iyo dhaawacyo.
Xiddiga khadka dhexe kaga ciyaara Gunners ee Matteo Guendouzi ayaa wajahaya dacwad looga gudbiyay xiriirka FA-ga Ingiriiska kaddib markii uu qalalaaso abuuray dhammaadka ciyaartii ay guuldarrada kala kulmeen kooxda Brighton sabtidii.
Guendouzi ayaa luqunta kaga dhagay weeraryahanka Brighton ee Neal Maupay markii ay idlaatay ciyaartii ka dhacday Amex Stadium, waxaana uu qarka u saaran yahay in ganaax garka loo suro.
Maamulka FA ayaa sugaya inay arkaan in dacwada laga soo gudbiyay laacibka reer France uu qayb ka noqdo faalladii uu Garsoore Martin Atkinson ka soo gudbiyay ciyaarta kahor inta aysan go’aan qaadan.
Xiriirka kubadda cagta Ingiriika ayaa wali sii wadan karaa baaritaan xitaa hadii aan la arkin, waxaana uu qaadi doonaa tilaabo dib u eegis ah oo ku aaddan dacwada xiddiga Arsenal, waxaana jirta suuro galnimo weyn oo horseedi karta inuu ganaax la kulmo.
Laakiin waxay umuuqataa in Guendouzi dacwadiisa ay sii taagnaan doonto illaa Atkinson xaqiijiyo inuu arkay dhacdada, bals uusan go’aan ka qaadan.
Waxaa sidoo kale lagu soo warramayaa inuu ganaaxan imaan karo ka hor kulanka ay Khamiista booqan doonaan kooxda Southampton, taasoo dhabar jab kale ku noqoneysa kooxda xaaladda ay ku xun tahay ee Arsenal.
Si kastaba ha ahaatee, dacwada lagu soo eedeeyay Matteo Guendouzi ayaa ah inuu dhuunta kaga dhagay weeraryahanka Brighton ee Maupay, isagoo ku eedeynayay inuu sabab u ahaa dhaawacii soo gaaray Goolhaye Bernd Leno.
Goolhayaha Jarmalka ah oo dhaawac darani jilibka ka soo gaaray ayaa Maupay ku eedeeyay inuu riixay isagoo aanan dhulka joogin kaddib markii uu u booday inuu soo qabto kubbad joog sare ku socotay, taasna ay sabab u noqotay inuu si aanan simannayn dhulka ugu soo dhaco, kaddibna dhaawac halis ah uu jilibka ka soo gaaro.
Macallinka kooxda Arsenal ee Mikel Arteta ayaa dhankiisa tilmaamay in Maupay uu si ula kac ah u dhaawacay Leno, taasna ay ciyaartoyda ka caroodeen, sidoo kalena Guendouzi uu dhammaan ciyaarta ku qaatay xaalad kacsan.
Markii ay ciyaarta dhammaatay, sidoo kalena la kala reebay Maupay iyo Guendouzi, ayaa la arkay xiddiga Brighton oo dhulka ku dhacay, balse muuqaalka shaashadaha ayaa dib u soo celiyay da’yarka Arsenal oo caloosha ka xagtay Maupay.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa la sugayaa go’aanka xiriirka FA uu ka qaato dacwada lagu soo oogay Guendouzi ee ah inuu u gacan qaaday dhaliyihii goolka guusha ay ku qaatay kooxdii martida loo ahaa, maadaama la arkay isagoo luqunta kaga dheggan.
Chelsea oo guul soo laabasho ah kaga soo gaartay kooxda Aston Villa garoonka Villa Park… SAWIRRO
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Real Sociedad iyo Real Madrid ee horyaalka La Liga oo la shaaciyay